कतार सरकारले तोकेको तलब नदिने १२ कम्पनीको लाइसेन्स रद्द ! - jagritikhabar.com
कतार सरकारले तोकेको तलब नदिने १२ कम्पनीको लाइसेन्स रद्द !
कतारको श्रम मन्त्रालयले कतारको कानुन अनुसार कामदारलाई सुबिधा नदिने १२ वटा कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरेको छ ।
कतारमा रहेका ती कामदारलाई कतार सरकारले तोकेको र कतारको कानुन अनुसारको सुबिधा नदिएको भन्दै ति कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले ती कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन र अनुगमन तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको प्रयास अन्तर्गत कानूनको प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै १२ वटा श्रम भर्ना कार्यालयको लाइसेन्स बन्द गर्ने र फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
घरेलु कामदारहरूको रोजगारदाताको अधिकार संरक्षण गर्न जारी गरिएका निर्णयहरू।
मन्त्रालयले घरेलु कामदारको ग्यारेन्टी वा घरेलु कामदार भर्नाको लागि अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा घरेलु कामदार भर्ना कार्यालयबाट कुनै दुर्व्यवहार वा उल्लंघन भएमा हटलाइनमार्फत रिपोर्ट गर्न सबै नागरिक र बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ ।
तपाईंले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईंको जम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस् । यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न ।निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस् । तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ । विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
तपाइँको कोटा कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आवेदन दिने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोटा पूरा भएको सम्भव छ ।
भर्ती एजेन्सीहरू र विदेशी रोजगारदाताहरूको लेनदेन इतिहास छ कि छैन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं यसलाई गुगल प्रयोग गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ ।
एसएमएस पठाउँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। 34001 मा पठाउन LT [space] [Lt-Number] टाइप गर्नुहोस्।